Delivery nguva: In 2 weeks
Supply kugona: hrs 1,000 pamwedzi
ZBK basa injector rinoumbwa zvikamu zviviri
1, chikamu Izvi zvinosanganisira chena chete-kushandiswa zvekupfakira adapteri uye kuraswa kushandiswa chete chena 0.3 Rine mamiririta kudzidza pasina sirinji (ampoule). Ndivo chinoumba uye zita hwaro Arakure injector.
2, chikamu ichi zvinosanganisira Injector uye Reset yemapurisa rinopa upfu kuti jekiseni
Structure neimwe chikamu
1.sterile chete-kushandiswa kuzadza adapteri: Cap, tsono pedhi uye tsono Tubing.
2.Disposable kuroorwa kushandiswa chena pasina sirinji: Barrel, Plunger uye makirisito kamwechete.
3.Injector: injector muviri, wakachengeteka zvechizarira kunze mhete, wakachengeteka zvechizarira mhete chomukati uye rukungiso.
4.Reset chiteshi: kumanikidzwa rokumusoro butiro, resetting nemizariro, resetting chiteshi pedhi.
Product operative musimboti
Hazvibetseri injector chinhu jekiseni mudziyo kuburikidza kumanikidzwa uye hamutsvaki tsono panguva Kubayiwawo jekiseni. Kuburikidza kushandiswa nakisa simba tsime rinokosha vaumbe yakakwirira kumanikidzwa, pasi kumanikidza ichi, nemvura mushonga vachaenda kuburikidza nhete chaizvo gomba uye kubereka mvura yoRwizi izvo zvinopfuura ganda uye mwaya kuti subcutaneous rukoko parutivi tsono sirinji.
1.Eliminate ari Kubayiwawo jekiseni marwadzo.
2.Eliminate puncturing kuitika kunokonzerwa tsono.
4.No Calluses, kuzvimba, Kukuvadzwa uye akaora.
6.No vanoda kugeza uye nyore kubata; diki Kukura uye nyore kutakura; amblyopic murwere anogona kurishandisa.
Product kushandisa sumo
1.Prepare ari injector
2.Fill ari Syringe
Product yepamusoro vimbiso
kambani yedu yakapfuura Iso9001, ISO013485 dzakawanda unhu gwaro uye ISO14001 chitupa kwezvakatipoteredza dzakawanda.
The kambani mumuviri, kemikari, utachiona mumarabhoritari uye pamwero mukuru mbereko midziyo inonzi zvigadzirwa vari pyrogen-akasununguka, chepfu-free. Tinewo mharidzo kamuri kuitira chigadzirwa unhu yacho.
Service uye kuzvipira
The mubvunzo Injector kugadzirwa nevanhu Shandong Zhongbaokang zvokurapa zvokurimisa Co., Ltd iri zvachose vaedzwa, chinja uye ikadzivisa inonzi chigadzirwa hwakanaka. Kana pane dzimwe kukundikana panguva kushandisa kana dambudziko quality, ndapota kudana yedu yokutengesa dhipatimendi uye zvinoda kugadziriswa, foni No. ndiyo + 86-0533-8688533.
Kumwe vimbiso: yedu Injector uye Reset chiteshi vane imwe gore garandi nguva sezvo rokutenga Musi uye FillingAdaptor uye mubvunzo Syringe (ampoule) vane makore maviri garandi nguva kubva mbereko musi.
Previous: Aizomupa Set With Nomazvo Filter And One Spike
Next: Kuzadza Adapter
Medical Hazvibetseri Injector
Mesotherapy jekiseni Gun
tsono Free Injector
Needleless Injector For jekiseni